ओपिसी सिमेन्टलाई निर्णय सच्याउन विज्ञको सुझाव | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार ओपिसी सिमेन्टलाई निर्णय सच्याउन विज्ञको सुझाव
ओपिसी सिमेन्टलाई निर्णय सच्याउन विज्ञको सुझाव
on: २५ मंसिर २०७६, बुधबार १७:४४ In: समाचारTags: No Comments
काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । नेपाल सरकारले ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तरका सम्बन्धमा लिएको पछिल्लो निर्णयबाट पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम हुन नसक्ने हुँदा त्यसलाई सच्याउन विज्ञहरुले सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा आमन्त्रित विज्ञहरुले ओपिसी सिमेन्टका सम्बन्धमा कायम गर्न खोजिएको मापदण्ड ठीक नभएकाले त्यसलाई लागू नगर्न राय दिए ।
समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्रका सहप्राध्यापक नुतनप्रसाद भट्टराई र प्रा.डा. गोकर्ण मोत्रासँग ओपिसी सिमेन्टमा सरकारले कायम गर्न खोजेको मापदण्ड र त्यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा पुग्न सक्ने असरबारे परामर्श माग गरेको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
रु १३ लाखसहित सुन कारोवार गर्दै आएका बाबुछोरा पक्राउ
२५ मंसिर २०७६, बुधबार १७:४४